Bit By Bit - Ethics - 6.8 Gabagabo
Cilmi-baarista bulshada ee da'da dijitaalku waxay kor u qaadeysaa arrimaha cusub ee anshaxa. Laakiin arimahan ma aha kuwo aan la cayimin karin. Haddii aynu nahay bulsho, waxaanu horumarin karnaa shuruucda la wadaago iyo heerarka la taageerayo cilmi-baarayaasha iyo dadwaynaha, ka dibna waxaan awoodnaa inaanu awood u leenahay awoodda da'da dijitaalka ah ee siyaabaha masuulka uga ah iyo faa'iido u leh bulshada. Cutubkani wuxuu ka dhigan yahay isku dayga aan ku leenahay jihadaas, waxaan u maleynayaa in furaha uu noqon doono cilmi-baarayaasha inay qaataan fikrado ku saleysan mabaadi'da, iyagoo sii wadaya in ay raacaan sharciyo ku habboon.
Qaybta 6.2, waxaan ku qeexay saddex mashaariic cilmi baaris oo dijitaal ah oo abuuray doodo anshax. Ka dib, qaybta 6.3 waxa aan ku qeexay waxa aan u malaynayo inay tahay sababta aasaasiga ah ee hubinta anshaxa ee cilmi-baarista bulsheed ee dijitalka ah: si degdeg ah kor ugu kaca awoodda cilmi-baadhayaasha si ay u ilaaliyaan una tijaabiyaan dadka iyaga oo aan ogolaansho ama xitaa wacyi-galin. Awoodahan ayaa badalaya sida ugu dhaqsaha badan xeerarkeena, sharciyada, iyo sharciyada. Marka xigta, qaybta 6.4, waxaan ku sharxay afarta qodob oo jira oo hagaya fikirkaada: Ixtiraamka Dadka, Faa'idada, Caddaaladda, iyo Ixtiraamka Sharciga iyo Daryeelka Dadweynaha. Ka dib, qaybta 6.5, waxaan soo koobay laba qaab oo anshaxeed oo ku salaysan raad-saameeyn iyo deontology-kuwaas oo kaa caawin kara mid ka mid ah caqabadaha culus ee laga yaabo inaad la kulanto: goorma ayay kugu habboon tahay in aad qaadato hab macquul ah oo suurtagal ah si aad u gaarto anshax ahaan habboon dhammaad. Mabaadiida iyo habdhaqanka anshaxeedku waxay awood u siinayaan inaad ka baxdo xooga saartid waxa loo ogolyahay sharciyada hadda jira iyo in aad kordhisid kartidaada aad ugu gudbin karto sababahaaga cilmi baarayaasha kale iyo dadweynaha.
Iyadoo ay jirto asalkaas, qaybta 6.6, waxaan ka wada hadalnay afar meelood oo si gaar ah ugu tartamaya cilmi baarayaasha bulsheed ee dijitalka ah: Ogolaanshaha la wargaliyay (qaybta 6.6.1), fahamka iyo maareynta halista macluumaadka (qaybta 6.6.2), asturnaanta (qaybta 6.6.3 ), iyo samaynta goynta anshaxa ee wajiga hubin la'aanta ah (qaybta 6.6.4). Ugu dambeyntii, qaybta 6.7, waxaan ku soo gabagabeynayaa saddex talobixin wax ku ool ah oo ka shaqeynaya aag oo leh habdhaqan aan la daboolin.
In la eego baaxadda, cutubkan ayaa diiradda lagu eego dhinaca cilmi-shaqsi doonaya aqoon generalizable. Sida oo kale, waxa ay ka dhigeysa in su'aalo muhiim ah oo ku saabsan hagaajinta nidaamka of kormeer anshaxa cilmi; su'aalo ku saabsan xeerka oo ka mid ah ururinta iyo isticmaalka xogta by shirkadaha; iyo su'aalo ku saabsan surveillance mass by dawladaha. Kuwani su'aalo kale waa cad oo adag oo ay adag tahay, laakiin waxa aan rajo ah in qaar ka mid ah fikrado ka soo anshaxa cilmi ahaan waxtar leh ee ka mid ah xaaladaha kale doonaa.